Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sacuudi Carabiya Warka » Tallaalka Sputnik V, oo fure cusub u ah Dalxiiska Sacuudi Carabiya
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Wararka Ruushka • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Ruushku waxay jecel yihiin inay safraan. Dhawaan kuwa lagu tallaalay Sputnik V waxay ku dari karaan Sacuudi Carabiya liiska baaldigooda. Waxa kale oo ka mid ah xajka, iyo cumrada gobollo badan.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ogolaatay gelitaanka shaqsiyaadka lagu tallaalay tallaalka Sputnik V ee Ruushka laga bilaabo Janaayo 1, 2022.
Sacuudi Carabiya ayaa ku biirtay 101 waddan oo kale oo oggolaaday gelitaanka shakhsiyaadka lagu tallaalay tallaalka Sputnik V ka dib wada-shaqeyn ballaaran iyo wadahadal dhex maray Wasaaradda Caafimaadka Sacuudiga iyo RDIF, oo ay taageertay Wasaaradda Maalgashiga ee dalka.
Oggolaanshaha ogolaanshaha Sputnik V ee la tallaalay si uu u booqdo Sacuudi Carabiya iyo tillaabooyin kale oo wadajir ah oo lagula dagaallamayo masiibada ayaa diiradda lagu saaray kulanka dhexmaray Wasiirka Caafimaadka Sacuudiga Fahad Al-Jalajel, Wasiirka Maalgashiga Sacuudiga Khalid Al-Falih iyo Madaxa RDIF Kirill. Dmitriev ee Riyadh horraantii November.
Go’aanka la gaaray ayaa u sahli doona Muslimiinta ka kala yimid daafaha caalamka ee lagu tallaalay Sputnik V inay ka qeyb qaataan gudashada waajibaadka Xajka iyo Cumrada ee goobaha ugu barakeysan ee Islaamka ee magaalooyinka Maka iyo Madiina.
Marka ay soo galaan dalka, dadka laga tallaalay Sputnik V waxaa looga baahan doonaa inay karantiilaan 48 saacadood oo ay qaataan baaritaanka PCR.
Wadamada u furaya xuduudahooda kuwa qaatay tallaalka Sputnik V waxay muujinayaan rabitaanka inay ka caawiyaan warshadahooda dalxiiska iyo ganacsigooda inay si dhakhso leh u soo kabtaan. Maaddaama Sacuudi Carabiya ay u furtay xuduudaheeda tallaalka Sputnik V, go'aankani wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa kordhinta qulqulka dalxiiska iyo abuurista xiriir ganacsi oo cusub oo u dhexeeya Ruushka iyo Sacuudi Carabiya, oo ay ku jiraan hawlaha Golaha Dhaqaalaha Ruushka iyo Sucuudiga.
Waxaa la aasaasay 2019, Goluhu wuxuu higsanayaa inuu horumariyo xiriirka dhaqaale iyo ganacsi ee laba geesoodka ah iyo sidoo kale maalgashiga u dhexeeya Ruushka iyo Sacuudi Carabiya ee dhammaan qeybaha kala duwan. Waxaa wada guddoominaya Kirill Dmitriev, madaxa fulinta ee RDIF, iyo HRH Prince Abdullah bin Bandar bin Abdul Aziz, Wasiirka Ilaalinta Qaranka ee Boqortooyada.
Guud ahaan, kala soocida oggolaanshaha tallaalada COVID iyo shahaadooyinka tallaalka waa tallaabo kale oo muhiim ah oo lagaga hortagayo takoorka tallaalka iyo taageeridda dadaallada dawladaha ee sida badbaadada leh ee dib loogu furayo xuduudaha dadka deegaanka iyo dalxiisayaashaba.
Shuruudaha muhiimka ah ee 102 waddan ee oggol booqashooyinka soo socda tallaalka Sputnik V[*]:
Shakhsiyaadka la tallaalay Sputnik V waxa ay booqan karaan wadar ahaan 31 waddan iyaga oo aan wax oggolaansho ah oo dheeri ah laga helin COVID-19;
71 waddan oo kale waxay codsadaan PCR diidmo ah ama baaritaanno ka hortag ah oo togan ama waxay leeyihiin shuruudo dheeri ah marka la soo galo.
Kaliya 15 waddan ayaa u baahan tallaalo aan ka ahayn Sputnik V. Kaliya 5 ka mid ah waddamadan (in ka yar 9% safarrada socdaalka caalamiga ah), oo uu ku jiro US (oo ka dhigan in ka yar 3%), waxay si buuxda ugu tiirsan yihiin liiska tallaallada ee WHO ay oggolaatay kaas oo Sputnik V uu yahay la filayo in lagu daro sanadkan.
Ilaha: wasaaradaha dalalka, goobaha dalxiiska
Fiisaha iyo (ama) ogolaanshaha gelitaanka kale ee loo baahan yahay, qofku waa inuu sidoo kale buuxiyaa shuruudaha kale ee aan la xidhiidhin xannibaadaha coronavirus. Falanqaynta fursadaha gelitaanka waxay ku salaysan tahay shuruudaha laga rabo dadka dalalka intooda badan, waxaana laga yaabaa inaanay ka tarjumayn xannibaado ama ku-takri-falka xoog dalalka la doortay ama qaybo gaar ah. 27 wadan ayaa wali xuduudo u xidhan booqdayaasha wadamada kale intooda badan